Na nzukọ na ndi otu ndi ozo, agbaliri m ha otutu oge inye m ihe akaebe a na-apụghị ịgbagha agbagha na enwere ike iji nlezianya hazie, gbue ma gbuo ya mgbasa ozi mgbasa ozi. atụ anya ya laghachi na ntinye ego. Isi ihe dị ebe a bụ atụ anya ya… M nwere ike ịtọ atụmanya si email, ịkwụ ụgwọ kwa click na search engine njikarịcha mkpọsa karịrị oge… ma ọ dịghị mgbe na-elekọta mmadụ. Anyị ekpuchibeghị anwansi algọridim ịbanye n'ime mmadụ psychy ma.
Ọ bụrụ na ị na-agbalị leverage na-elekọta mmadụ media Dịka ọmụmaatụ, tupu imalite iji mmekọrịta gị nke ọma, dịka ọmụmaatụ, mmemme mmechi iji mechie na ị nweela mmekọrịta na ndị debanyere aha gị… ị bụ mkpụrụ. Ọ dị mfe karịa ịmechi azụmaahịa nke mmekọrịta siri ike karịa ịtụfu ụfọdụ ngwa ahịa dị oke ọnụ na Facebook ma tụọ anya nzaghachi ka mma na ịlaghachi na ntinye ego! (Okuko mmiri ọkụ anaghị enyere ndị na-ere burgers aka.)
Ikpe ziri eziMitchell.com
Chicken nọ n'okpuru: